DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-7AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos” | Laashin iyo Hal-abuur
DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-7AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos”
World Wide Website (kooxda ereyga macluumadka ayaa taa beddelkeeda ku talineysa webka ama www inay tahay wax hooseeya, waa adeeg ka dhigaya bogagga internetka iyo faylasha kale ee xogta laga heli karo internetka ama intranet. Bogagga shabakadaha waxaa loogu yeeraa dukumiintiyo hypertext oo ka koobnaan kara qoraal, sawirro, fiidiyoow iyo waxyaabo kale oo badan, sidoo kale xiriiriyeyaal guji kara. Iyadoo la adeegsanayo barnaamij kombuyuutar oo loo yaqaan biraawsar, adeegsadaha ayaa soo dejisan kara bogagga shabakadaha ee ku keydsan server-yada webka ee kala duwan (websaydhyada), kuna dhex wareegi kara bogagga adiga oo gujinaya isku xirayaasha feejignaanta iyo bogagga, waxay sameystaan shabakad caalami ah oo dukumiintiyo isku xiran leh, sidaa darteed magaca (www), wuxuu ka taagan-yahay:
World Wide Website. Haddii aan af-soomaaliyeynana noqonaya: ”Mareegaha wararka gaarsiinta carro-edeg”.
Daalacashada si xur ah inta u dhaxeysa boggaga internetka iyo hadaf la’aan u raacidda isku xirka u dhaxeeya degelladaha adduunka waxaa lagu magacaabaa ka-baafinta webka. Ururinta bogagga shabakadda ee ku kaydsan server gaar ah waxaa loo yaqaan websayd. World Wide Web fikrad ahaan waxaa soo bandhigay aqoonyahan u dhashay dalka Ingriiska Tim Berners-Lee bishii maarso 12, 1989-kii, markii uu u soo bandhigay shaqo-bixiye, xarunta cilmi baarista ee CERN ee Switzerland. Isla sannadkaas, wuxuu abuuray degelkii ugu horreeyay ee loogu talagalay: CERN. Websaydkii ugu horreeyay ayaa loo soo bandhigay dadweynaha bishii Ogosto: 6, 1991-dii.
Qaab dhismeedka farsamada:
Bogagga shabakaddu waxay si muuqaal ah ugu kaydsan yihiin kombuyuutarrada ku baahsan adduunka. Kumbuyuutar sameeya bogagga waxaa loo yaqaan ‘web server’. Software ku habboon looma heli karo inta badan nidaamyada hawlgalka. Badanaa server wuxuu maareeyaa websaydka, balse, dhowr boggag internet ah ayaa lagu soo ururin karaa waxa loogu yeero web host (iyo websayd ballaaran waxaana maamuli kara dhowr kombiyuutar).
Qaab-dhismeedka aasaasiga ah ee shabakadda waxaa lagu sameeyaa bogagga internetka iyo websaydada, balse, waxay adeegsadaan isku xirayaasha, URL-yada (“URLs”) waxay sidoo kale tixraaci karaan ilaha kale. Bogagga shabakadda waxaa badanaa loo kala qaadaa iyada oo la adeegsanayo hab maamuuska isgaarsiinta xogta ah ee HTTP.
URL-ku wuxuu leeyahay borotokoolka foomka, server: lambarka dekedda, dariiqa, filename? Halbeegyada, baroosinka, halkaas oo borotokoolku yahay http isgaarsiinta webka ee caadiga ah iyo https oo loogu talagalay isgaarsiinta shabakadda ee “encryption”. Hab maamuusyadani waa kuwa inta badan loo isticmaalo webka laftiisa. Waxaan sidoo kale qeexi karnaa borotokoollada kale ee lagu isticmaalo internetka, sida FTP (“ftp”), Usenet ”news” Email, mailto iyo IRC (irc) iyo waliba qaar aan lagu adeegsan Internetka, sida lambarrada taleefannada (TEL). Server-ka waxaa lagu qeexay qaabka magaca domain (magaca DNS) ama cinwaanka IP-ga. Server DNS ah ayaa loo shaqaaleeyay inuu ku turjumo magaca domainka cinwaanka IP-ga, sidaa darteed maahan inaad xusuusato lambarrada IP-ga. Lambarka dekedda ayaa u oggolaanaya xiriirka in loo maro habka saxda ah, haddii adeegaha shabakaddu uusan isticmaalin dekedda caadiga ah 80. Waddada, magaca faylka iyo cabbiraadaha waxaa tarjumaya adeegaha shabakadda, badiyaa sida faylka leh magaca su’aasha ku jira A barnaamijka lagu socodsiinayo xudduudaha la siiyay ama fure xog. Baroosinka waxaa adeegsanaya biraawsarka si uu u helo meesha saxda ah ee dukumintiga.
Nooca feyl ee bogagga shabakadda badanaa waa html (oo ah luqad calaamadeyn ah oo loogu talagalay ujeeddada), balse, waxa aad ku xiriiri kartaa ilaha nooc kale bogagga websaydkuna waxay ku jiri karaan faylal kale oo nooc ah, sida sawirro (badanaa jpeg, gif ama png), maqal iyo muuqaal ah. Haddii borotokoolku yahay http ama https, nooca feylku wuxuu ku qeexan yahay borotokoolkan, haddii kale biraawsarku xaalado badan ayuu ku qiyaasi doonaa nooca feylka laftiisa, badanaa wuxuu ku saleysan yahay feyl kordhinta ama billowga feylka laftiisa.
Xiriirka ka dhexeeya internetka iyo webka: (Gudbiyaha iyo mareegaha)
Websaydku waa mid ka mid ah meelaha badan ee laga codsado internet-ka, balse, halka ay WWW ka tahay dalabka ugu caansan, internet-ka (shabakadda luuqadda lagu hadlo) iyo WWW inta badan waa lagu wareersan yahay.  Shabakaddu waxay xoog yeelatay bartamihii 1990-meeyadii, isla goortaas oo qoysaska gaarka loo leeyahay iyo shirkadaha baaxadda weyn leh la siiyay kansho/fursad ay ugu xirmaan internetka. WWW wuxuu ku xigay emaylka adeegga dadka cusub ee badanaa la adeegsan jiray. Noocyada ay soo bandhigtay WWW ayaa horeyba u jiray qaab ahaan, iyo waxyaabo kale, hab maamuuska wareejinta feylka FTP iyo nidaamka daalacashada faylka Gopher oo lagu tilmaami karo inay yihiin horudhaca shabakadda, balse, WWW waxay ahayd mid aad u badan oo si fudud loo isticmaali karo. Adeegyada internetka ee caadiga ah ee aan ku xisaabtamin websaydka waa e-mayl, taleefanka IP-ga, ciyaaraha khadka tooska ah iyo farriimaha degdegga ah (adeegyada farriimaha).
Si kastaba ha noqotee, soohdinta u dhaxeysa mareegaha iyo barnaamijyada kaleba waa mid cakiran, maadaama ay jiraan websaydyo dhowr ah oo adeegyadan ah, sidaa darteed uma baahnid inaad billowdo barnaamij kumbuyuutar gaar ah adiga oon adeegsaneyn biraawsarka si aad u hesho. Adeegyo badan oo u baahan codsiyo gaar ah, sida qalabka warbaahinta iyo barnaamijyada moobeelka ee laga heli karo App Store (Apple) iyo Google Play (Google), waxaan u isticmaalnaa iyada oo ku saleysan isla tiknoolojiyadda isgaarsiinta (HTTP maamuuska) sida webka, in kasta oo adeegyadu aysan ahayn mid had iyo jeer laga heli karo iyada oo loo marayo daalacashada caadiga ah.
Baraha bulshada (Social media)
Waxaa la xaqiijiyey oo daraasado la sameeyey cadayneysaa in 4-bilyan oo u dhiganto 52% qof in ay adeegsadaan ugu yaraan 2-saac ilaa 3-saac maalintii ayey dadku istacmaalan, ugu yaraan nus milyan muuqaallo oo internet-ka leysugu diro.Warbaahinta bulshadu waa teknoolojiyad dhexdhexaad ah oo fududeynaya abuurista ama wadaagidda, is dhaafsiga macluumaadka, fikradaha, danaha shaqada iyo qaababka kale ee muujinta iyada oo loo marayo bulshooyinka dalxiiska iyo shabakadaha. In kasta oo caqabado ay ka taagan-tahayqeexitaanka warbaahinta bulshada ay soo ifbaxayaan sababo la xiriira noocyo badan oo keli-keli ah iyo dhisme-ka ah warbaahinta bulshada oo hadda la heli karo. Waxaa kale oo lagu qexi karaa:
Waa barnaamijyo is-dhexgal ah oo Websate ku saleysan internetka. Waxyaabaha ay soo saartey isticmaale, sida: qoraallada, qoraalka ama faallooyinka, sawirrada dhijitaalka ah ama fiidiyowyada, iyo xogta laga soo saaray dhammaan isdhexgalka khadka tooska ah, waa halbawlaha warbaahinta bulshada.
Isticmaalayaashu waxay u abuuraan astaamo gaar ah oo loogu talagalay boggaga ama abka ay qaabeeyeen isla markaana hayaan hay’adda warbaahinta bulshada. Warbaahinta bulshada ayaa sahleysa horumarinta shabakadaha bulshada ee khadka tooska ah iyada oo la isku xirayo astaanta adeegsadaha iyo kuwa shakhsiyaadka ama kooxaha kale. Haddana waxaa jira astaamo caan ah:
Baraha bulshada waa is-dhexgalka Webset codsi ku saleysan Internet-ka.
Isticmaalayaashu badanaa waxay ku helaan adeegyada warbaahinta bulshada iyaga oo adeegsanaya barnaamijyada ku saleysan websaydyada kombuyuutarrada iyo laptop-yada ama soo dejinta adeegyada bixiya waxqabadka warbaahinta bulshada ee aaladdooda moobaylka (tusaale, taleefannada gacanta iyo kiniiniyada) Maaddaama isticmaaleyaashu ay ku hawlan yihiin adeegyadan elektaroonigga ah, waxay abuurayaan aalado is-dhexgal oo heer sare ah oo shaqsiyaadka, bulshada iyo ururradu ay wax ku wadaagi karaan, wax ku wada abuuri karaan, uga wada hadli karaan, uga qayb qaadan karaan, waxna uga beddeli karaan waxyaabaha ay soo saaraan isticmaale-yaasha ama waxyaabaha is-daaweynta ah ee internetka lagu dhejiyo. Intaa waxaa sii dheer, warbaahinta bulshada ayaa loo isticmaalaa in lagu diiwaangaliyo xusuusta; wax ka baro oo baadho waxyaalaha; is xayeysiiso; iyo sameysashada saaxiibtinimo oo ay weheliso koritaanka fikradaha abuurista baloogyo, war-baahinno, fiidiyowyo iyo goobo lagu ciyaaro. Xiriirkaan isbeddelaya ee u dhexeeya aadanaha iyo tikniyoolajiyadda ayaa diiradda lagu saarayaa berrinka soo koraya ee daraasadaha farsamada.
Qaar ka mid ah boggaga warbaahinta bulshada ee ugu caansan oo in ka badan 100 milyan oo isticmaaleyaal ahi ay ka diiwaan gashanyihiin oo ay ku jiraan: faysbuug (iyo la xiriirkeeda faysbuug, farriin-side Messenger), TikTok, WeChat, Instagram, QZone, Weibo, Twitter, Tumblr, Baidu Tieba, iyo LinkedIn. Waxay kuxirantahay tarjumaada, barnaamijyada kale ee caanka ah ee mararka qaar loogu yeero adeegyada warbaahinta bulshada waxaa kamid ah YouTube, QQ, Quora, Telegram, WhatsApp, LINE, Snapchat, Pinterest, Viber, Reddit, Discord, UK, Microsoft Teams IWM. Wikis waa tusaalooyin abuurka iskaashi abuurka ah.
Julian Assange, aasaasihii, af-hayeenkii iyo tifaftirahII guud ee WikiLeaks
Wikileaks, sidoo kale WikiLeaks, (waxaa leh wiki iyo ingiriis. Leak for leaks) waa urur caalami ah oo aan macaash doon ahayn oo daabaca dukumintiyada sirta ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo filim sameeyayaasha, iyagA oo kaashanaya warbaahinta. WaxyaabahaA waxaa soo galiyay ilo aan la aqoon oo loogu yeero: ‘whistleblowers’, websaydka ururka iyo dukumiintiyada oo ku yaal Sweden. Ururku wuxuu sheegay inuu doonayo inuu soo bandhigo hab dhaqanka anshax xumada ah ee dowladaha iyo shirkadaha, wuxuuna raadinayaa in si bilaash ah loo helo macluumaadka danta guud ku jira. Soo bandhigidda: Wikileaks ee musuqmaasuqa baahsan ee ka jira Tunisia ayaa loo arkaa mid ka mid ah dhowr arrimood oo ka dambeeya kacdoonkii Jasmine iyo kacdoonkii Carabta, kaas oo ka billowday Tunisia bishii Janaayo 2011 una gudbay dhowr keli-talis. In kasta oo magaca iyo astaamaha la adeegsado, haddana Wikileaks ma lahan wax xiriir urur ah Wikipedia, balse, waxay adeegsataa isla barnaamijkan, Mediawiki. Haddaba, Wikileaks waxay ku guuleysatay abaalmarinno dhowr ah oo ay ka mid tahay: The Economist New Media Award 2008.
Ganacsigan waxaa billaabay bishii Diseembar 2006 koox suxufiyiin ah oo kuwa Shiinaha diiddan, ganacsato IT ah iyo xisaabyahanno ka kala yimid adduunka dacalladiisa. Hal sano ka dib, xog uruurinta websaydka ayaa koray oo gaaray 1.2 milyan oo dukumiinti ah. Bishii Juun 2009, goobtaas ayaa lagu soo warramay in ay lahaayeen 1200-boqol oo mutadawiciin ah.
Dukumiintiyada la daabacayo waxaa soo xulay koox muhiim ah oo ka kooban ilaa 20 tifaftire, inta badan barnaamijyada iyo kuwa u ololeeya khadka tooska ah, iyaga oo kaashanaya kun weriye in ka badan ama ka yar oo taabacsan, xiriirna la leh. WikiLeaks ma xaqiijiso waxyaabaha iyo ilahaay xogaha kasoo meersato, balse, waxay u daayeen dib u eegista dadweynaha marxaladda hore, ka dibna muddo ah ilaa shan wargeys oo waaweyn oo dalal kala duwan ah, kuwaas oo lacag laga qaadi karo ka hor inta aan la sii deyn. Gaar ahaan sannadkii 2011, waxyaabaha aan wax laga beddelin ee ay ku jiraan macluumaadka magac aan la magacaabin ayaa loo soo bandhigay dadweynaha.
Mid ka mid ah aasaasayaasha, horumariya barnaamijyada Australiyaanka ah, xayeysiiyaha iyo dhaqdhaqaaqa internetka Julian Assange, ayaa lagu tilmaamay inuu yahay tifaftiraha guud ee ururka iyo afhayeenka guud. Markii Assange loo xiray tuhun la xiriira dembiyo galmo oo ka dhacay Iswiidhan oo uu codsaday in laga soo celiyo boqortooyada Ingiriiska, saxafiga Iceland ee Kristinn Hrafnsson waxaa loo magacaabay afhayeenka rasmiga ah ee Wikileaks bishii Diseembar 2010.
Afhayeenka Sweden ee ururkaasna waa wariye Johannes Wahlström. Isagoo ah saxafiga kaliya ee Swedishka ah ee marin u heli kara xogaha dibloomaasiyadeed ee sannadii 2010 (cablegate), wuxuu baaritaan ku sameeyay maqaallada iyo muuqaallada TV-ga ee SVD, Aftonbladet iyo Documents-ka SVT.
Warbaahinta bulshada ayaa ka duwan warbaahinta caadiga ah (tusaale ahaan, joornaallada daabacan, wargeysyada, TV-ga iyo baahinta raadiyaha) siyaabo badan oo ay ku jiraan tayada gaaritaan, soo noqnoqosho, adeegsi, deg deg iyo joogto. Intaa waxaa sii dheer, baraha warbaahinta bulshadu waxay ku shaqeeyaan nidaamka gudbinta wada hadalka. Tusaale: ilo badan oo laga helo qaatayaal badan, halka warbaahin dhaqameedku ay ku shaqeeyaan qaab moodeji ah oo la isugu gudbiyo, hal il dad badan oo qaata. Tusaale ahaan: wargeys ayaa loo galiyaa macaamiil fara badan isla markaana idaacad ayaa isla barnaamijyada ku baahisa magaalo dhan.
Tan iyo markii si baahsan loo ballaariyay internetka, warbaahinta dhijitaalka ah ama hadallada dhijitaalka ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu matalo ama lagu aqoonsado dhaqan. Barashada sida hadallada ka jira deegaanka dhijitaalka ah ay u noqdeen geeddi socod cusub oo muhiim u ah aqoonyahanno badan iyo nolosha casriga ah.
Goobjoogayaashu waxay ogaadeen saamayn ballaaran oo wanaagsan oo taban oo ku saabsan isticmaalka warbaahinta bulshada. Warbaahinta bulshada ayaa gacan ka geysan karta hagaajinta dareenka shakhsiga ee ku xirnaanshaha bulshooyinka dhabta ah ama kuwa tooska ah waxayna noqon kartaa aalad isgaarsiineednama suuqgeyn wax ku ool u ah shirkadaha, ganacsatada, ururrada aan macaash doonka ahayn, kooxaha u doodista, xisbiyada siyaasadeed iyo dowladaha. Kormeerayaashu waxaa kale oo ay arkeen inay kor u kacday dhaq dhaqaaqyada bulshada iyaga oo adeegsanaya baraha bulshada oo ah aalad loogu talagalay isgaarsiinta iyo abaabulka xilliyada qalalaasaha siyaasadeed ay jiraan.
Social mediayaha (Baraha bulshadu) Waxaa xaqiiq ah inay saameyn weyn ku yeelatey warbaahinta nooc kasta oo ay tahay ama social meeduyuhu waa halbowlaha warbaahinta tiknolajiyada cusub ee casriga ah. Waxa caado iska noqotey in madaxda caalaamka ama hey’adaha kale ee warka sii daaya ay warkooda ku qoraan social mediayah sida tweterka ama instgramka iwm. Madaxda qaarkood oo saxaafadda iyo warbaahinta caadiga ah u arka kuwa colaadinaayo ama colaad u qaaday weriyeyaasha iyo warbaahinta caadiga ah sida uu ku sifoobey madaxweynihii hore ee Mareykanka Donal Trump oo adeegsan jirey tweterkiisa.